ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်ရာတွင် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်မှ လမ်းမြေအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သော ဥယျာဉ်ခြံမြေများနှင့် လယ်ယာမြေများအတွက် နစ်နာကြေးပေးလျော်ရန် မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့် ကြန့်ကြာနေသည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် မေးခွန်း
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ယခင်မြန်မာနိုင်ငံ တွင်ရှိသော လူမျိုးများဟု သတ်မှတ်ထားသော လူမျိုး၊ လူမျိုးစုအမည် များတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသော လူမျိုးစုကိစ္စကို နိုင်ငံတော်မှ မည်သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ မြို့နယ်မြေစာရင်းမှူး၏ မမှန်မကန်လုပ်ရပ်ကြောင့် တောင်သူများနစ်နာနေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
၇၂ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် (၂၃. ၇. ၂၀၁၅)
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဇလွန်မြို့နယ်၊ သက္ကယ်ကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ တိုက်ကြီး မြို့နယ်၊ ရေပေါ်သောင်ကျေးရွာအုပ်စုအကြား ပေါ်ထွန်းလာသော မြေနုကျွန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်အငြင်းပွားသည့်ကိစ္စအား စိုက်ပျိုးချိန်မတိုင်မီ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှု ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(၇၁) ရက်မြောက်နေ့ မှတ်တမ်း (၂၂.၇.၂၀၁၅)
၇၁ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် (၂၂. ၇. ၂၀၁၅)